Iingoma ezingama-40 eziPhambili zeDisney, eziBekwe - Umculo
Ngo-Jon Favreau's live-action-ish remake of INgonyama yeNgonyama Ngaphandle kwale veki, sigqibe kwelokuba sibeke amanqaku angama-40 awona manani aphezulu omculo asuka kwiifilimu zoopopayi ezikhutshwe yiDisney. Ngaphambi kokuba ubuze, hayi, iifilimu zePstrong zazingafakwanga.
40. Umfo Onjengawe, I-Hunchback yeNotre Dame
Umhlalutyi weBailey: UQuasimodo ngumntu olilolo ofuna nje ukuthandwa, kodwa konke anako zii-gargoyles ezothusayo ezikhokela le ngoma. UQuasi ufuna ukuba aqatshelwe ngu-Esmeralda, umfazi awathandana naye, kwaye xa ejonge ngaphaya kwedolophu etshisayo yaseParis, uyazibuza ukuba ingaba ukhuselekile na. Ii-gargoyles zisebenzisa eli thuba ukumenza ukuba acinge ukuba naphi na apho akhoyo, ucinga ngaye kwaye umbe ngokupheleleyo. Ii-gargoyles zithatha konke ukungafezeki kwe-Quasimodo kunye nokungaqiniseki kwaye zijike zibe zizinto ezinqwenelekayo. Endaweni yokuba bambize ngokungathandekiyo, babhekisa kuye njengobalaseleyo. Ingoma, kwifashoni yenyani yeDisney, ihamba ngotshintsho olwahlukileyo olwahlukileyo kunye neebethi ezahlukeneyo, ngalo lonke elixesha ikwenza uzive ngathi zii-gargoyles liqela lakho leqela elonwabisayo. Iijikelezo zabo aziqinisekisi ncam, kodwa bafumana i-A ngomzamo.
39. Uthando, URobin Hood
URob Harvilla : Uxolo ku Kuthetha iiStrato , IServico , Ubunzima, okanye Ixesha elide , URobin Hood yayiyeyona movie imnandi kunazo zonke yowe-1973, ingxoxo evuthayo ngeSherwood Forest eyayibethwa ngabantu abathanda ilizwe laseGoli uRoger Miller kunye nengoma yomculo wegitala no-orchestra ethandekayo, ethi yafumana eyona Ngoma igqwesileyo kwi-'74 Oscars. (Yaphulukana ne- Indlela Esasiyiyo. Ibhalwe ngumculo omkhulu weDisney uGeorge Bruns kunye noFloyd Huddleston kwaye baculwa nguNancy Adams, yinto encinci yokuphefumla yothando lukaLana Del Rey ekufuneka eyigubungele lo mzuzu: Sakuba sibukele ilizwe elinobuvila lihamba / Ngoku iintsuku zibonakala ngathi ziyabhabha. / Ubomi bufutshane, kodwa xa buhambile / Uthando luyaqhubeka nokuqhubeka. Ewe, kwi-2009, Uthando lwenza isandi ku-Wes Anderson UMnu Fox omangalisayo , ukuba ufuna olunye uphawu lwengoma yokunyameka kwengoma, ewe, awuyenzi.
38. Imiphefumlo Engonwabanga, Mermaid encinci
UMikha Peters : Asisoze sifumane i-backstory ka-Ursula ngaphakathi Mermaid encinci . Endaweni yoko sifumana ucezu olusikiweyo lwesimo sakhe sokujonga ngengoma, esingcono amaxesha asisigidi. Imiphefumlo engemihle ihlwempuzekile inkulu-eyokuqala kuba iyabetha, okwesibini kuba yingoma kumdlalo bhanyabhanya wabantwana malunga nokuba i-avarice inesifo njani, njengoko kubonisiwe ngumtshiso omkhulu, otyikityiweyo kunye nepinki yomsi ethi ngamanye amaxesha ithathe imilo yamadoda afuna ukuba zide kwaye ziyabetha, kunye nabafazi abafuna ukuba mncinci, babe nesitayile ngakumbi, kwaye bahle ngakumbi. Inqaku lelokuba konke oku kufuna kuya kukubulala okanye kukuthumele kwisiphelo esibi ngaphezu kokufa, okuthi, kwakhona, sisinyithi kumdlalo bhanyabhanya wabantwana.
37. Phaya ngaphandle, I-Hunchback yeNotre Dame
UMichael Baumann : Olu luphawu nje olukhulu lokubhalwa kwengoma-enyanisweni, ukuba kukho nantoni na, yinto encinci yokuqhubela umboniso bhanyabhanya wabantwana, kunye neeselfowuni, utshintsho oluphambili, kunye nokugqobhoza kwerejista ephezulu kaTom Hulce. Le ayisiyo ngoma uyicule kunye nayo, yingoma yokuhlala kunye nokushukunyiswa yiyo. Oko kuyahambelana Ukubuyela umva Isandi esimnyama, esimnyama, nesibi, esingazange sihlale ngokuchanekileyo xa ndibona le movie njengomfundi webanga lesine. Mhlawumbi lixesha lokuba uphinde uphonononge obu buqili bukhohliweyo beDisney's Golden Age, kuba Ngaphandle phaya, ubuncinci, iyashukumisa njengayo nayiphi na into esetiweyo yomculo weDisney.
36. Andizukuthi (ndisemathandweni), IHercules
UKate Knibbs : Abalinganiswa ababhinqileyo bakholisa ukuba babe ngabalungileyo ngokupheleleyo okanye abagwenxa ngokupheleleyo kwiimuvi zeDisney — iMaleficent okanye Ubuhle bokulala, ukuba uyafuna — kodwa uMeg unzima kancinci ukwahlula-hlula ngokucocekileyo, njengoko engumntu olungileyo onengxaki yesimo sengqondo owenza ukhetho olubi. Uya kuba kuphela yinkosazana yeDisney enesoka elidala, ngaphandle kokuba akayinkosazana yaseburhulumenteni yeDisney- kwaye mhlawumbi yeyona nto ilungileyo, kuba ikwangumlinganiswa ongumfazi waseDisney obonakala ngathi ukhathalele kancinci ngokwahlulahlula. Andizukuthi (Ndisothandweni), njengemvumi yayo, utshintsho oluhlaziyayo lwesantya seDisney. Ingoma yothando evela kumntu ongafuni kuthandana, owaziyo ngokwaneleyo ukuba angacinga ukuba izinto aziyi kulunga. UMeg akabathembi abantu kwaye akazithembi kwaphela — kusenokuthetha ukuba akayena iDisney Princess, kodwa iyamenza ukumkanikazi onokuphinda abuye.
35. Amazwe amabini, Tarzan
UAndrew Gruttadaro : Iingoma zokuvula ziyisiko kwi-Disney canon (Isangqa soBomi, iiFathoms ezingezantsi, njl. Njl.), Kwaye ngelixa iiLizwe eziBini ayingoyena ulungileyo kuzo-kwaye Tarzan Iifilimu eziphambili zeDisney zoopopayi-ngokuqinisekileyo ziyawenza umsebenzi. Ubukhulu becala, ixabiso lalo libonisa ukuba uPhil Collins sele eza kufumana isimanga kwaye (ngempumelelo) amanqaku e-movie yonke; kodwa ikwabonelela ngemo ye-saccharine yesitshixo esisezantsi apho umntwana gorilla atyiwa yi-TIGER!
34. Yiloo nto Abahlobo Bayiyo (Ingoma yeXhalanga), Incwadi yeJungle
IHarvilla: Kwinqanaba eliphantsi kakhulu ngo-1967 Incwadi yeJungle , xa iqhawe lethu uMowgli ekwindawo yakhe yokudlalela, nanko kusiza amaxhalanga, ikwartet yokucacisa ngokucacileyo iBetlesque moptops (evakaliswe nguJ. Pat O'Malley, Digby Wolfe, Lord Tim Hudson, kunye noChad Stuart) ophatha iqhawe lethu ngobumnandi kuphela sisongelo esincinci se-barberhop-quartet showstopper: Singabahlobo nazo zonke izidalwa ezingena phantsi kwepike / Ngapha koko asikaze sidibane nesilwanyana esingasithandiyo. UDisney, enyanisweni, wazama ukufumana iiBeatles zokwenene zegig, kodwa wabalekela ekuhleleni iingxabano, okanye mhlawumbi uJohn Lennon uvele walungisa into efanelekileyo . Njengomvuzo wentuthuzelo, ingwe embi uShere Khan wehla ngokuwisa inowuthi ephantsi engakholelekiyo. Ungakhe uzame ukucula oku ekhaya.
33. Into apho, Omhle kunye nesilwanyana
UBen Lindbergha : Into ayithengisi a, kulungile, uguqulelo lwedisneyfied yothando. Le yingoma ethetha ngobudlelwane obukhula kancinci apho uloyiko ekuboneni okokuqala luye kancinci luguquke luthando njengoko i-Belle iqala ukubona ngaphaya kwendlela erhabaxa nengacaciswanga iRhamncwa elakhe ngayo ukuze lizikhusele ekugatyweni. Obu ayibobudlelwane obusekelwe kwizimbo zomzimba ezinesibindi okanye intabatheko. Yindibaniselwano evela ekubuzeni ukuqala kokuvela, ukuhlala uvulelwe iimpawu ezintle zomnye umntu, kwaye ngokuthe ngcembe ubona into apho eyayingekho ngaphambili.
Ingoma kuphela eyadlalwa liRhamncwa- enkosi a ingcebiso ngumlingisi we-Belle Paige O'Hara-Into ekukho ukubuyiswa kwayo kade Umntu kwakhona , ingoma ekhutshwe kwi-original Omhle kunye nesilwanyana kodwa ibuyisiwe kwiinguqulelo ezilandelayo. Nangona le yinto yesibini, i-Belle kunye neRhamncwa abaculi okanye omnye komnye. Ngokobuchwephesha, abaculi kwaphela; Inani elipheleleyo liqhubeka ngokudlula ngaphakathi, libonisa ukungathandabuzi kweentaka zothando ukuveza oko baziva. Into elula Akukho ngoma imnandi kakhulu okanye engalibalekiyo Omhle kunye nesilwanyana , kodwa isenokuba yeyona ibalulekileyo; kwisithuba esingaphezulu kwemizuzu emibini, ibamba ukukhula kwabalinganiswa kwaye yenza isigqibo semovie sikholise.
Uyilo lwango-2018 oluhlekisayo
32. INyaniso yeVangeli, IHercules
Iibhanki: Imuvi IHercules ngumdaka, otshisayo kuba unovulo olugqwesileyo lwayo nayiphi na imovie yeDisney, edibanisa isishwankathelo esimangalisayo sentsomi yamaGrike enesandi sevangeli esithandekayo kumqambi u-Alan Menken kunye nopopayi odlalayo (kunye nokhokelo oluhle oluvela kumbalisi kaCharlton Heston ). Inyaniso yeVangeli ibubop epheleleyo kwaye ifezekisa inani elibalulekileyo lokwakha umhlaba kwimizuzu embalwa. U-Lillias White, ocula njengo-Calliope, ongomnye we-Muses ephambili, usebenze ixesha elide kwi-New York theatre kunye ne-cabaret, kwaye andinakucinga ukuba nabani na ndingathanda ukucula-ndibalisa ibali lobomi bam ngakumbi.
31. Ngaba uyafuna ukwakha i-Snowman? Frozen
Gruttadaro: Ikwabizwa ngokuba yingoma encinci, ingoma engacaphukisiyo Frozen , Ngaba uyafuna ukwakha i-Snowman? yinxalenye yeqela elineengoma ezikhethekileyo zeDisney: Ezidlalayo ngelixa iShit eyoyikekayo Iyaqhubeka. (Kukweli qela: Amazwe amabini avela Tarzan , kwaye nayiphi na ingoma edlalwa yiokhestra xa kuzingelwa umama kaBambi.) Yile ngoma idlalayo njengoko sibona abazali baka-Anna no-Elsa besifa ngokuqhekeka kwenqanawa, ke, uyazi, ukungcangcazela okuhle macala onke. Kodwa ndiyayithanda kuba ivusa ubuntwana ngohlobo olumnandi kodwa olubuhlungu, njengoko ukhumbula zombini uvuyo lokukhathalela kuphela ukudlala kwikhephu kunye nesizungu sokungabinamntu wokudlala kwikhephu. Ngokubanzi, yingoma ecekeceke ngakumbi kunaleyo.
30. Yiya kumgama, IHercules
UZach Kram : Enye yemidlalo yam endiyithandayo kwikhompyuter yayiyiyo IHercules ushicilelo lwe Incwadi yamabali e-Disney ka-Disney , indawo yokukhangela kunye nokucofa i-adventure ngeendlela ezahlukeneyo zokugcina imidlalo encinci yehlabathi. Uyakudlala njengeqhawe le-titular kwaye unqumle iintloko ze-Hydra, uthintele ii-Titans ekuqothuleni i-Olympus, njalo njalo. Ecaleni kwale midlalo yayisisikhululo somculo apho unokumamela-kwaye ucule kunye, ukuba ubutyekele kakhulu-kwiminikelo embalwa yesandi. Ngaloo minyaka, akukho nto ibetha ukuphulaphula i-jam-pump jam ngaphambi kokuba uhambe umgama wokuthumela iHadesi kwi-Underworld. IHercules Isandi somculo mhlawumbi sikhunjulwa ngcono ngomculo kaMuses, kodwa iibhaladi ezivela eHerc naseMegara zezona ndawo zilungileyo; Inyaniso yokuba andizukuthi (Ndisothandweni) ayikho kwi-10 ephezulu sisityholo sokugweba soogxa bam.
29. Ukucamngca, Mulan
ULindsay zoladz : Ababaninzi kuthi abanokunxulumana namava okuhamba ngokufihlakeleyo ukuya kulwa nomlawuli okhohlakeleyo, kodwa ongekabikho Apha Ndiza kubonisa nini ukuba ndingubani ngaphakathi? Ukubonakalisa kusika kwisiseko sento evakalelwa ngayo ukuba yi-Mulan, kodwa ikwathetha nakubani na owakha waziva ngathi kuye kwafuneka bazifihle ngokwabo ukuze bamkelwe: Ngoku ndiyabona ukuba ndinxibe imaski endinokukhohlisa ngayo Ihlabathi / Kodwa andinakuyikhohlisa intliziyo yam. Umdlali weqonga kunye nemvumi uLea Salonga uzisa iipatos ezintle kwinguqulelo kumdlalo bhanyabhanya, kodwa ndiya kuhlala ndikhetha uguqulelo olwenziwa ngumculi orekhodayo owayesaziwa ngelo xesha uChristina Aguilera. I guess lomntu ebenguye ngaphakathi ebenqwenela nje ukunxiba ezi bhulukhwe .
28. Xhuma Phambili, Aladdin
UAlison Herman : Le ngoma yintshayelelo yethu ku-Aladdin, Charming Rapscallion, ebaluleke kakhulu ekugcineni ukuthembeka kwethu emva kokuba eguqukile waba ngu-Aladdin, iNkosana etyebileyo. Lo okwishumi elivisayo unokuba ebeba abathengisi abathembekileyo baseAgrabah, kodwa uyenza ngokuxolisa ngokuhlekisayo ngokwaneleyo ukuba awunakukunceda kodwa yingcambu kuye. Ingoma ihamba ngokukhawuleza kwindawo yokutshixa kunye nokuleqwa kwezitrato zedolophu, isazisa kwiivenkile, amapolisa, kwaye, uh, iinkundla zekhaya lika-Aladdin. (Ngokwenyani asibaboni emsebenzini, kuba le movie yeDisney, kodwa thina yenza jonga omnye umfazi evakalisa u-Aladdin kunokuba amnandi. Iqhawe lethu ekugqibeleni likreqile abo balisukelayo, hayi ukuba uyoliswa yiyo. Utye ukutya ukuze uphile; kufuneka ubiwe ukuze utye. Ngaphandle koko, baya kuvana-kwaye bangaphelisi kwimfumba yomgquba.
27. Zilungiselele, INgonyama yeNgonyama
Gruttadaro: Zilungiselele mhlawumbi bobona bungqina sinabo kwangoko bokuba iScar yindwana nje emdaka ethanda umdlalo weqonga. Njengokuba ejikeleza ezithunzini-ngexa inkungu eluhlaza iphuma emhlabeni, eqaqambisa izidlele zakhe, azingca kakhulu ngazo-uScar uyayinyusa kwaye acacise iyelenqe lakhe lokubulala umntakwabo. Ndiyathetha, jonga le ngonyama:
Thatha malunga neeseyiphu ezintandathu zamanzi, i-Scar.
Ubomvu Amanxuwa amaKratshi ngoko nangoko (Inguqulelo yeDisney yeLizwe laseGolide evuthela isikhokelo se-3-1); Yilungiselele ingxelo yakhe ye-arch thesis; kananjalo nomkhombe; kunye neengcebiso ezilungileyo kuye nabani na malunga nokuthatha uvavanyo, enze intetho, okanye azame ukuthatha inkosi edumileyo.
rapper tyler umdali
26. Zero ukuya kwiHero, IHercules
Baumann: Umboniso awuzange ubetheke nzima kangako. Kwinqanaba elinye, uZero ukuya kuHero ngumthumeli okrelekrele wembaleki yodumo, njengoko kubonisiwe nguMichael Jordan phakathi kwiminyaka yoo-90s. Kodwa kwelinye inqanaba, umgca Ngubani owabeka 'uvuyo' kwi 'gladiator'? yingoma ebambekayo enesingqi ekufuneka ikhuthaze iintsomi namabali ayo.
25. Malunga neNdonga yoMlambo, IPocahontas
UMegan Schuster : Le ayingoma yam endiyithandayo evela IPocahontas (leyo ibingayi kuba ngu-17. Imibala yomoya) kodwa ngoku izele ngokulinganayo kunye nomyalezo wokuxabisa indalo-owona mxholo ubaluleke kakhulu kwi-2019! Iphela kwisikweko esinzima malunga nokukhetha indlela (okanye kule meko, umlambo offshoot) ukuhamba kancinci, kodwa iDisney kunqabile ukuba ubuqhetseba malunga nokuzama ukuwela. Nokuba yeyiphi, le ngoma sisikhumbuzo esikhuthazayo sokuba utshintsho lunokuba yinto elungileyo-ukuba uza kuyo ngesimo sengqondo esifanelekileyo.
24. UHeigh-Ho, I-Snow White kunye neeNtsuku ezisixhenxe
IHarvilla: Isebenza kubavukuzi, isebenza kwiDisney animators, isebenza kubaqhubi be-Uber, isebenza kubablogi: Heigh-Ho, isithsaba somculo we-1937 I-Snow White kunye neeNtsuku ezisixhenxe , ngumhobe osebenzayo onzima, onwabile kwaye uzimisele, isikhumbuzo sokuba kukho umsebenzi ekufuneka wenziwe kodwa yintsimbi yesi-5 kwenye indawo. Idityaniswe nguFrank Churchill kunye namazwi kaLarry Morey- kwaye yaculwa nguGrumpy, Happy, Sleepy, Bashful, Sneezy, Dopey, kunye noDoc (igama lesetet yeembonakalo) -nguyise wabo bonke, njengemiculo yeDisney efumaneka kuyo yonke indawo, a plucky ukuzingca nokuzimisela kunye nophawu lwenkcubeko kuyo yonke indawo. UTom Uyalinda ndiyithandile. UBrian Wilson ndiyithandile. Iingcuka ndiyithandile. IiSimpson ndiyithandile. Kuba wonke umntu uyazi ukuba wonke umntu unomsebenzi ekufuneka ewenzile.
U-eric kunye no-sarah abazingeli bendlu
23. Mhle, Omhle kunye nesilwanyana
UCharlotte Goddu : Ngaphambi Omhle kunye nesilwanyana ungene kwi-therianthropy kunye nokuqweqwedisa ezenza uninzi lwesiqwenga sayo, le ngoma ibeka isiseko ngokunxibelelana nezinto eziphambili zomlinganiswa ka-Belle: Uyakuthanda ukufunda kwaye mhle kakhulu. Kuyihlazo, nangona kunjalo, ukuba yonke imovie iyayityeshela eyona nto yakhe ibalaseleyo: ukukwazi ukufunda kunye nokuhamba ngaxeshanye. Oko, impumlo ibambeke ngokuqinileyo encwadini, umfazi uyakwazi ukubhadula kwiziko elixineneyo ledolophu yakhe yaseFrance engakhange aqhawulwe ngumzimba oshiyekileyo, kum, eyona nto imnandi kumdlalo bhanyabhanya obonisa ikhandlela yokuthetha.
22. Intombazana ekufaneleyo ukuyilwela, Mulan
URiley McAtee : Kwiminyaka engama-21 ukusukela oko Mulan yakhululwa, le ngoma ikhule isikhunta kwiindawo. Unokuthelekelela ukuba yeyiphi eyona nto siyiphosileyo ukusukela oko saya emfazweni ayikhali msulwa ngo-2019 njengoko ababhali kunokuba bebezimisele njalo, kwaye boyiso, bayokuma ngasemnyango bazive benyulu. UMushu uphinde waphosa kwi-catcall ye-cringe-inducating ngexesha elinye. Phantse inguqulelo yeDisney yegumbi lokutshixa, indlela ye-PG yamajoni adiniweyo ukuba abelane ngolweyiso lwabo ngokwesondo. U-Mulan-ngubani ongenayo intombazana ekufanele ukuba ayilwele- uzama ukubuyela umva ngokuchasene namaqabane akhe amdaka, kodwa ukukhutshwa kwakhe (Uyenza njani intombazana enengqondo, ehlala ethetha ingqondo yakhe?) Ayisiyiyo kwaphela umhlaba nabo.
Kodwa leyo yimbono enye kwiNtombazana ekufanele ukuba uyiLwele. Njengoko imikhosi inyathela emaphandleni, siyabona ukuba iyintoni kanye kanye abayilwelayo: iinduli ezinendudumo, imilambo ethambileyo, kunye namafama athuleyo e-feudal China ngoxolo. Kukho into entle apha efanele ukukhuselwa, kwaye iyenziwa icace ngokuphela ngesiquphe kwengoma, xa amajoni ekhubeka kwilali eyonakalisiweyo. Le juxtaposition yenziwe yomelele ngakumbi ngokwenzekayo kwimizuzwana emva kokuphela kwengoma, kwaye uMulan ufumana unodoli kwindawo etshisayo eseshushu. UMulan ekugqibeleni uyazi ukuba ngawaphi amantombazana uye ukulwela.
21. Andifuni Ukuba Njengawe (Ingoma yeNkawu), Incwadi yeJungle
Gruttadaro: ULouis Prima usasaza kwimovie yeDisney? Ndibhalise. Incwadi yeJungle inazo ezinye iingoma ezithandekayo kuzo naziphi na iifilimu zeDisney, kwaye I Wan'na Be Like You (kutheni isiphosiso silapho? Akukho ngcamango!) yinto ebalaseleyo, ingoma ejika ihlathi libe yindawo yaseNew Orleans malunga nonyaka ka-1934. Ibhalwe ngabazalwana bakaSherman, abafana eninokubulela ngokuba liLizwe elincinci (Emva kwayo yonke loo nto), yingoma elungileyo ngokwenene ngaphandle I-Disney yayo iyabambeka. I Wan'na Be Like You is one of the best offering from Disney, ubungqina bokuqala bokuba eyona ndlela yokwenza ingoma yabantwana elungileyo kumdlalo bhanyabhanya kukwenza ingoma elungileyo, ixesha.
20. Yiyeke, Frozen
Schuster: Idina Menzel, blast my body into athom using the sonic boom of your vocal cord! Ngokukrakra, Mayiyeke yijam, kodwa iya kuba malunga nekota njengempembelelo ngaphandle koluhlu lukaMenzel kunye namandla agqithisileyo elizwi lakhe. (Kuya kufuneka ndiqaphele ukuba ndiyinkunzi-Sucker yotshintsho oluphambili, kwaye, mfana, ngaba le ngoma inenye-kunye nengubo entle evela ku-Elsa.) Le ngoma yaba yinto eyathi yaculwa ngumtshana wam ekuthwesweni kwabo isidanga, kwaye ngovuyo wayiqhelisela oko kumele ukuba bekuziiveki ezimbalwa ezikhokelela kwintsebenzo. Ndicinga ukuba iphantsi kolu luhlu kuba kukho ukungabikho komnqweno wokujikeleza (i-movie yakhululwa kuphela ngo-2013), kodwa umyalezo wayo kunye nokuhanjiswa kwe-Menzel kwenze kube yinto yokukhiya ukuba ibe yintoni iCandelo leLizwe lakho kwisizukulwana sam.
19. Ukubetha ikhwelo ngelixa usebenza, I-Snow White kunye neeNtsuku ezisixhenxe
UAlyssa Bereznak : Xa iDisney ikhutshiwe I-Snow White kunye neeNtsuku ezisixhenxe ngo-1937, ngexesha lokuphela komsila woKudodobala Okukhulu, ulonwabo lwabantwana lwalunqabile, iRoombas yayingekho, kwaye zimbalwa iintsapho ezazinengeniso elahliweyo okanye ixesha lokukhululeka lokuxabiseka ngenzala yabo. Ke ilandelela ukuba enye yeetoni zabantwana ezona zikhohlakeleyo kwenzeka nje ukuba ibe yingoma eyonwabela imisebenzi yakho. Isampula lyric: Kwaye xa utshayela igumbi / Khawufan 'ucinge ukuba umtshayelo / Ngaba ngumntu omthandayo kwaye kungekudala / Uyakufumanisa ukuba uyadanisa. Ngaphandle kokuqhekeka kwisandi sokuqala somculo esikhutshiweyo kwezentengiso, i-Whistle Ngelixa Usebenza sisixhobo esivela kwixesha elilula kakhulu, xa uluntu lwalungenakuqonda ubumnandi bobuntwana obunomdla ngakumbi kunesidalwa sezidalwa zemithi ezivuyayo ukunceda Jikeleze indlu.
18. UGaston, Omhle kunye nesilwanyana
USurrey: I-ode kwi-bro fragility, i-Gaston yi-ego yokunyusa umchasi wethu ofuna ukusuka kumkhosi wakhe wee-sycophants emva kokulahlwa ngu-Belle kwangoko kwifilimu. Ukuzixakekisa ngendlela atya ngayo amaqanda ngentsasa nganye- Akukho mntu une-cholesterol ephezulu, imithambo evalekileyo, kunye nokunyusa uxinzelelo lwegazi njengoGaston! -Kwezinye izinto ezibaxwayo, uGaston uyonwabisa njengoko umxholo wayo uphantsi uyothusa. (Yintoni eyoyikisayo kunesidenge esingakwaziyo ukuthatha impendulo kwaye inomdla wokuqala kukuzibetha izinto?) Nangona kunjalo: Akukho mntu ulahla i-banger epheleleyo njengoGaston, kwaye kufuneka simncome ngenxa yoko.
17. Imibala yomoya, IPocahontas
Zoladz: Okokuqala, le yingoma yekaraoke engaphantsi. Ndithembe. Kodwa kananjalo, sisifundo esinjani esikwisizukulwana sendalo esingqongileyo! Kudala ngaphambi kokuba i-millennials isongelwe kukuxhalaba malunga nentlekele yemozulu singabantwana abaculayo kunye nale Oscar-win Disney ballad malunga neengozi ezingapheliyo zobubi. Ucinga ukuba ungumnini wawo nawuphina umhlaba, umhlaba yinto efileyo onokuyibanga, uPocahontas utshutshisa uJohn Smith (oziva kufanelekile ukuba aqaphele apha, uvakaliswa nguMel Gibson). Ithoni yakhe iyalahla, kodwa njengoko ebetha loo chorus, isingqi swoops kwaye sinyuka njengokhozi acula ngalo. UVanessa Williams ukhuphe isandi esinqunyiweyo , kodwa ityala kufuneka liye kuJudy Kuhn, owazisa ubomi kwingoma uPocahontas ucula kumdlalo bhanyabhanya. Unakho ukuba ngumnini womhlaba kwaye nangoku, ucula ekugqibeleni, konke okwakho ngumhlaba de ube uyakwazi ukupeyinta ngayo yonke imibala yomoya. Kukho izinto ezimbi kakhulu onokuzibhala kumqondiso woqhankqalazo.
16.Umhlobo onje ngam, Aladdin
Iibhanki: Umhlobo onje ngam ngumboniso wemizuzu emibini enesiqingatha kaRobin Williams, eyona nto imnandi ngokuvakalayo. Ngaphakathi kwefilimu, i-Genie izama ngamandla ukuchukumisa u-Aladdin, kunye ne-frenetic, ye-heavy-band ye-band enkulu yokuthengisa ibala liyakhwankqisa ungaze uyeke ukucinga ngendlela engaqhelekanga ngayo ukuba iGenie kubonakala ngathi iyayazi ingxoxo yesiFrentshi.
15. Ubuhle nerhamncwa, Omhle kunye nesilwanyana
Gruttadaro: Ngaba ndichithe iminyaka elishumi enesiqingatha yobomi bam ndicinga ukuba uNkosikazi Potts wayecula umthungi wexesha elidala njengexesha kwaye uBuhle kunye neRhamncwa yayiyinto ethile ethandwayo malunga nomenzi wesuti owayekhulile? Ulunge kakhulu. Andinantloni. Nangona kunjalo, ngoku ndiyaqonda ukuba kunjalo Ibali njengoko indala njengexesha kwaye loo Buhle kunye nerhamncwa yeyona ngoma imnandi ngokufumana uthando olungapheliyo kwiindawo ezingalindelekanga. Ibhalwe ngoothixo beDisney uHoward Ashman kunye noAlan Menken kwaye baculwa nguthixokazi u-Angela Lansbury, le ngoma yile ivayo kwaye ngokufudumeleyo uqhelene. Njengokuba uncuthu lwengoma ludlula, uziva ngathi amanqaku ngawakho — ukuba abhalelwe wena. Liqhinga andinakukuqonda, kodwa ndiyakwazi-kwaye ndiza-ndicula kunye no-Beauty kunye ne-Beast ngalo lonke ixesha ndinethamsanqa lokuliva.
INkosana uAli, Aladdin
Ukuwola: INkosana u-Ali ayiyona nto ibalaseleyo Aladdin Ingoma — qhubeka ufunda! —kodwa yeyona nto imnandi kwaye yeyona ilungileyo yokufaka umlingo wale bhanyabhanya. Ine-tempo, ine-trumpet fanfare, inamazwi ahlukeneyo kaRobin Williams; iqala ngohlobo oluthile locwangco kwaye-ngelixesha u-Aladdin aqhekeza kwiminyango yebhotwe-ikhula phantse ibeyindoda kwasekupheleni, enemibala kunye nemigca yeevesi kunye nezenzo zobugqi obudanyazayo phantse ngokukhawuleza okukhulu ukubamba konke kubukelo olunye. I-sultan e-ensorcelled isebenza njengabaphulaphuli abafanelekileyo bokuma, bemangalisiwe njengoko injalo yinkcazo yelizwe langaphandle. Ingoma iyakuchasa ukuba umamele ngaphandle kokucofa unyawo lwakho kwaye uthambise intloko, ukuba ayizalanga ngokudanisa ngexesha kunye nekwayara.
13. Xa Unqwenela Phezu Kwenkwenkwezi, IPinocchio
ILindbergh: Kuyamangalisa ukufumana impendulo eqinileyo yeemvakalelo kwingoma eye yaba ngumhobe wendibaniselwano, kodwa ke yinto eyakwenzeka xa uninzi lweemovie zobuntwana ezithandwa kakhulu zilandelwa yingoma efanayo. (I-Disney iyayazi into eyenzayo.) Xa unqwenela phezu kweNkanyezi akunakuphepheka: Kugutyungelwe amaxesha amaninzi, kugcinwa yiThala leeNcwadi leCongress, kunye ikhredithi nguBrian Wilson ngokukhuthaza enye yeengoma eziBalaseleyo zabafana baseBeach, iSurfer Girl. Khange ndikwazi ukuyiphepha nokuba bendiya kwi-Disney yokuncitshiswa kwemithombo yeendaba yokutya; Ndihlala ngasendlebeni kwidokhi yeeDisney zokuhamba ngeenqanawa, ke amanqaku asixhenxe okuqala eculo lomculo, kuqhushumba uphondo lwenqanawa , rhoqo ndingenelele kwimfihlo yam. Andikwazi ukuthi ndiyakhathazeka.
Kushicilelwe i IPinocchio ngo-1939, xa unqwenela kwiNkwenkwezi iphumelele i-Award ye-Academy ye-1941 ye-Best Song yokuqala, eyenza ingoma yokuqala yeDisney ukuba ifake i-Oscar. Nangona uninzi lwabadlali abaphumeleleyo belithathile ixesha labo kwingoma echukumisayo kule minyaka ingama-80 idlulileyo, akukho nguqulelo ikhuselo inokukhuphisana nexabiso lemvakalelo yentsusa, ebonisa ilizwi lomculo lomculi kunye nomdlali weqonga uCliff Edwards, ilizwi likaJiminy Cricket. Ngokuqinisekileyo, amazwi anokuchaza umfanekiso wobundlobongela wobuntu obudala — nantoni na enqwenelwa yintliziyo yakho iza kuza kuwe? —Kodwa intelekelelo iyonwabisa xa ihlala.
12. Izinto ezifunekayo, Incwadi yeJungle
Peters: Kuba uninzi lweengoma ezikolu luhlu, imovie ekuthethwa ngayo isaya kuba yiMovie ngaphandle kwazo-oku kuyinyani ngokunzulu kwizinto eziyimfuneko. Ukubeka ecaleni ukuba ongasekhoyo uPhil Harris (Baloo, kodwa noJohn omncinci ovela URobin Hood , Patou ukusuka I-Rock-a-Doodle , no-O'Malley ukusuka I-Aristocats ) yayinkulu engxoweni yakhe, ingoma ishushu, iyothusa kwaye iyathuthuzela. Uhlobo lokudada ezantsi emlanjeni esiswini sebhere enobuntu ekwenzeka ukuba ithambekele kumculo. Isikhumbuzo esilungeleleneyo nelanga sokuba indalo iphela iyathanda ukuzihlela.
11. Akukho Matata, INgonyama yeNgonyama
Schuster: Ukusuka kurhwaphilizo, amanqaku okuvula e-plink-ling ukuya kwisiphelo se-jazzy, akukho Matata luhambo oluguqulayo. Amandla amakhulu ayebuye phakathi kwiminyaka yoo-90s kangangokuba yaba ngaphezulu kwengoma evela kumdlalo bhanyabhanya wabantwana: Yayiyintshukumo eyiyo. YOLO ngaphambi kokuba YOLO ibekho; Ibinzana eliqhelekileyo lokukhwela emqamelweni ngaphambi kokuba uhlale uzolile kwaye uqhubeke nokufumana iibhodi zePinterest. Umyalezo wayo ulula kwaye ucaciswe gca kule nto ithi: Ithetha ukuba akukho zinkxalabo kwiintsuku zakho zonke. Ungayichazanga ividiyo yomculo (funda: imeko evela kwentsusa Ingonyama King movie) ngempama:
Ingoma isebenza njengesingeniso sethu sobabini uburharha obukhethekileyo bukaTimon (obuchazwe nguNathan Lane) kunye nePumbaa (Ernie Sabella) kunye nemontage kaSimba ekhulayo. (Ngapha koko, oopopayi basakhangeleka bengakholeki nangemva kweminyaka engama-25- jonga nje ngokuthelekisa Ukubuyela kwakhona kukaJon Favreau Kwaye ngelixa ingumboniso wefilimu entle, akukho Matata isenokuba yeyona nto imnandi kwimizuzu emine yayo nayiphi na imovie yeDisney. Eyona ibonakala ifanelekile.
10. Yanga Intombazana, Mermaid encinci
U-Goddu: Into yokuqala yokuqala: Yanga iNtombazana ithatha indlela yokwenyani ye-movie-yakhutshwa ngo-1989 yokuvuma ukuba, kule mihla nakweli xesha, andinakukuvuma. Ayithathi igama, akukho nelinye igama / Qhubeka kwaye uphuze intombazana? Hayi, ndoda. Amagama amaninzi angcono! Kodwa Mermaid encinci Indlela yokubuyisela kubudlelwane bezothando yindaba ezindala. Masibeke ukungavumi ecaleni okomzuzwana ukuze siyixabise ingoma yokuguqula ubungqongqo ngokunyaniseka okupheleleyo kunye nokunyaniseka kwe-bald. Ndiyakholelwa ngokuqinisekileyo ukuba umntu angabilisa iiplothi ezimalunga neepesenti ezingama-75 zeemovie zokumanga. Kodwa zingaphi kwezi bhanyabhanya ziqhayisa ngenani lomculo elinikezelwe kuloluphakathi, ukhetho olunxulumene ne-smooch? Bambalwa kakhulu, umntu unokuphikisana. Ngamanye amaxesha, iba malunga nokuba uyayiphuza intombazana.
9. Ndiza kwenza indoda ngawe, Mulan
Peters: Ingoma ye pop kunye neokhestra enkulu kunye necandelo lokuxhasa inyama eliyinyama, eyona inokwenzeka ukuba ithumele yonke imoto egcwele abantu abadala xa isiza kushukuma iiyure ezintathu kuhambo lwendlela. Ndicinga ukuba isibonakaliso esikhulu sendlela endiza kuyenza ngayo indoda iphume kuwe iya kuba kukudumisa kwayo ixesha elide, ngaphandle kokuba yingoma yesibini / eyona ingcinezelo / yengcinezelo eMulan ngasemva kweHlonipho kuthi sonke.
ncaa ibhola 2019 umdlalo wevidiyo
8. Andikwazi kulinda uKumkani, INgonyama yeNgonyama
Iibhanki: USimba udlula kwindawo enzima INgonyama yeNgonyama -Oko kukuthi, hleze silibale, imuvi yabantwana malunga nenkwenkwe eqhubekeka nokuwa ngokweemvakalelo kokubukela umalume wakhe ebulala utata wakhe. Kodwa ngaphambi kokuba konke ukwenzakala kuqale, uye acule I Just Can't Wait to Be King, enye yeengoma ezidlalwa ngokugqibeleleyo zeDisney. USimba unelungelo, unekratshi, kwaye uyathandeka kakhulu, ehlekisa ngendlela yakhe kubukumkani bakhe obuza kuba bubukumkani ngaphandle kononophelo emhlabeni. Bekungayi kuba nakho ukungoneleki ukuba bekungabambeki kangako.
7. Phantsi koLwandle, Mermaid encinci
USurrey: Kunye Mermaid encinci Ingoma emnandi yangaphantsi kwamanzi, iDisney ibonakalise inyani kwindalo iphela: Ulwandle alunanto. Ngaphantsi koLwandle iyosulela ukuya kwi-jam ukuya-nokuba iphulaphule inguqulelo yokuqala, ephumelele u-Oscar-kunye no-Grammy okanye enye yeengoma zayo zangoku. ( Ukudibanisa kunye neBubba Sparxxx Mermaid encinci lizukile njengoko livakala.) Mermaid encinci uphakathi kwezinto ezininzi ezenziwa nguDisney ezenziwa ngokusebenza, kwaye ngelixa ezinye iikona ze-intanethi zikwi-tizzy malunga nokuphosa kwayo i-Ariel-lol yehlisa umoya, uyisidima! -ngowona mqobo wakhe mikhulu kukuphila ngokuvisisana ne-stellar yoqobo isandi. Ukucacisa i-crustacean yomntu wonke oyithandayo, uSebastian: Uphupha ngokwenza kwakhona ezakudala, kodwa yimpazamo enkulu leyo.
mf doom ngaphandle kwesigqumathelo
6. Ngaba Uyaluva Uthando Ngobu busuku, INgonyama yeNgonyama
USurrey: Masithembeke: Ukuba, njengam, wawungumntwana omncinci ukuqala kwakho ukubukela INgonyama yeNgonyama , Ngaba Uyaluva Uthando Ngobu busuku aluvusi luthando lukhulu. Ndabona iingonyama ezimbini zikhumbula kwaye zidlala kunye ngongcwalazi; izinto ezimsulwa! Kodwa ngoku? Thixo othandekayo, ubuso bukaNala yeyona nto i-DTF ndakhe ndayibona. (Ndiyaxolisa.)
Akukho kudelela kuDonald Glover kunye no-friggin 'uBeyoncé, kodwa ngo-Jon Favreau's live-action version of Ngaba Uyaluva Uthando Lobusuku lwenziwe ukukhanya kwelanga kunye neengonyama ezimbini ze-photorealistic kunye ezingabonakaliyo ezibonakala ngathi zivela kwi IPlanethi yoMhlaba uthotho, akukho mbuzo umkhondo wokuqala-kakhulu njengefilimu yokuqala-uhlala engukumkani. Kwaye kufanelekile, le yona yoyikeka ngokugqithileyo.
5. Yiba lundwendwe lwethu, Omhle kunye nesilwanyana
Zoladz: Inkcazo yokumisa umboniso. Ulandelelwano lweeNdwendwe zethu kwi (ewe, eyokuqala) Omhle kunye nesilwanyana Ngumsebenzi wobukrelekrele obubonakalayo, ubukrelekrele, kunye nopopayi lwe-2D-yonke loo nto ivakala ngathi lolona hambo lubalaseleyo lweasidi lonke. (Isiphatho sesibane ... uyathetha? Kwaye unesigama sesiFrentshi?) Yiba lundwendwe lwethu sisingeniso esifanelekileyo kwimilingo ebabazekayo emsebenzini ngaphakathi kwinqaba yeNyama, kunye nabalinganiswa bayo, ukusuka kwi-Chip ukuya kuNksk Potts ukuya kwintsiba engathandekiyo -idasta. Umfutho wenani uqhubeka usakha njengoko unyuka usiya kwisiphelo esigqwesileyo ngokwenyani, ngexesha apho uLumiere efika khona ukuba ayenze njengeyona superstar eyona nto ayiyo. Yiba lundwendwe lwethu luphawu olubonakalayo, oopopayi abasondeleyo beDisney abaze kuBusby Berkeley. Ukutya wedwa akuzange kubonakale kumnandi kangaka!
4. Inxalenye Yehlabathi Lakho, Mermaid encinci
Iibhanki: Inye into encancayo malunga nokuba ngumntwana kukuba awubalulekanga, kwaye ngaxa lithile uyaqonda ukuba kufuneka ulinde de ube ukhula kancinci ukuba ube ngumntu wokwenene emhlabeni. Inxalenye yeZikhonkwane zeLizwe lakho ezikhawulezayo ukulinda ebuntwaneni malunga nokulinda ngokungapheliyo ukuze ubaluleke ngcono kunayo nayiphi na ingoma yabantwana yemuvi. Kuyamangalisa ukuba ingoma engakanani ngokulangazelela isebenza kwikhathuni malunga nabantu abangamanyala, kwaye isebenza kuphela ngenxa yokuxhalaba kuka-Ariel okuphethwe njengengxaki yokwenyani. Ndamthanda uAriel xa ndandisakhula kuba wayecula ndifuna okungakumbi! ngokungathi wayeyifanele ngokwenene, kwaye kwakupholile ukuba nenkosazana yeDisney esona sidima sayo yayikukuthanda ukwazi.
3. Uya kuba sentliziyweni yam, Tarzan
Baumann: Kwi Tarzan Isandi, uPhil Collins wajonga iinzame zikaElton John ezithandwayo Ingonyama King kwaye ndazama ukulinganisa ukunyaniseka ukuya kuthi ga kwi-11, ngalo lonke elixesha kungakhange kubetheke inkunzi yenkomo yomculo weqonga ngendlela uSir Elton enza ngayo. Isiphumo, Uya kuba sentliziyweni yam, sesinye seziqwenga zomculo ezithandekayo kwiimvumi zangoku zepop, ezinamazwi avakala ngokungathi abhalwe ngutata okude ezama ukubuyisela uthando lwabantwana bakhe ngenyembezi .
Oko kuyinyani ngokukodwa kulungelelwaniso olunye lukanomathotholo, oluguqulelo oluchanekileyo lwesihloko esithi Uyakuba sentliziyweni yam. Ngesizathu esithile, loo nguqulelo yimizuzu emine ubude, xa uninzi lokuphakamisa okunzima ngokweemvakalelo kwenziwa kwimizuzwana yokuqala engama-30 ngemitya, evakala njengokuchazwa kwasemva kwenkqubo yokubetha kwentliziyo yomama. Ndingabhala ngaphezulu, kodwa ndilila kakhulu andiboni isikrini sam.
2. Isangqa soBomi, INgonyama yeNgonyama
ILindbergh: Isangqa soBomi sisandi esivakalayo kulandelelwano oluvulekileyo lwefilimu yeDisney, indawo esebenzayo ngokuzoba ababukeli ukuba ibaleke engafinyezwanga phakathi INgonyama yeNgonyama 'Yimincili yonyaka ka-1993 Itreyila yetreyini , ukubhengeza Ibhokisi yeofisi Ukuhlaziywa kweDisney. Lo mbono usebenze ngaphandle kwengxoxo yayiqukiwe ekuqaleni kuba umfanekiso nomculo bezithetha ngokwawo. Isangqa soBomi asiyongoma nje; yintetho ethi ingoma ethandwayo esele ingene kuwo onke amagumbi enkcubeko, nokuba kungenjalo imizobo ye (okanye izingqinisiso) ingoma uqobo lwayo okanye njengombono wokuba imovie ingene kwisichazi-magama.
Iqulunqwe kwaye yenziwa ngu-Elton John kwisithuba esingaphantsi kweeyure ezimbini, isangqa soBomi siphulukene nee-Oscars ukuba Ngaba Uyaluva Uthando Ngobusuku, enye ingoma kaJohn evela kwingoma yesandi, ephumelele iAward Academy Award yeNgoma yeNgqondo eyi-1995. KaJohn Uhlobo lwedwa ye Ngaba Uyaluva Uthando Ngobu busuku kungcono kunokuba enye kwi-movie , kodwa ekaJohn ukusebenza kwepop Isangqa soBomi pales xa kuthelekiswa Ingonyama King ukurekhoda, kungaphelelanga apho kuba kusilela ingoma kaLebo M. yesiZulu. Ukudityaniswa kwesikhalo sokuvula kunye nomfanekiso welanga elibomvu eliphuma emadlelweni lenze izigidi zabaphulaphuli kunye nababukeli bazive ngathi bahleli kwiPride Rock, enqunyanyiswe kwilanga.
1. Ihlabathi Elitsha, Aladdin
IHarvilla: Ngaba awunakulinga ukuvala amehlo akho, okanye nokuba ucinga ngokufumana yonke into malunga nale nto. Ihlabathi elitsha liphela liyi-Disney's kilele, uhambo lomlingo kunye nekhaphethi yokumangaliswa kunye ne-PG-ulinganise imincili yothando eneempawu zokubulala, umbulali (Shining shimmering splendid), utshintsho oluphambili lokubulala, kunye nobukhazikhazi obaneleyo bembumbulu. isenzo sokuphinda senziwe Khange ikwazi ukuyijija phezulu . Ibhalwe nguthixo weDisney uAlan Menken kunye namazwi nguTim Rice-kwaye waculwa ngu Aladdin Iinkwenkwezi uBrad Kane kunye noLea Salonga kwifilimu- Ilizwe elitsha liphumelele zombini iOscar yeNgoma eQhelekileyo yoqobo Kwaye, kwindawo yokuqala (kwaye kuphela!) yeDisney, IGrammy yeNgoma yoNyaka, ukubetha uSting, uBilly Joel, uNeil Young, kwaye, ewe, Isonka senyama . Inguqulelo ye pop, kunye noPeabo Bryson kunye noRegina Belle, nkqu betha hayi. 1 kwi-Hot 100 , Ukutywinwa kwengoma eyodwa yolawulo kwikhathalogu yeDisney echazwe ligunya. Yicime ngomlilo ngokuzayo xa ukwi karaoke kwaye ubone ukuba ayikukuhambisa na kwenye indawo .
ncaa unc ihlazo lezemfundo
imarshawn lynch imo yesilo ibaleka
Ndiyayithanda inkqubo ye-90s